Ikhodi ye-Google Analytics yama-akhawunti amaningi
I-Google Analytics: Landelela Ama-Akhawunti Amaningi (Ikhodi Entsha)
ULwesibili, April 5, 2011 Lwesine, Disemba 1, 2011 Douglas Karr
Imvamisa kunesidingo sokulandela ikhasi elilodwa kuma-akhawunti amaningi we-Google Analytics. Isibonelo, mhlawumbe unama-akhawunti amaningi - elilodwa leklayenti nelilodwa le-ejensi yakho - futhi ungathanda ukufaka imininingwane kulowo nalowo. Ukuze wenze lokho, kufanele ucacise womabili ama-akhawunti ekhasini ngalinye.
Lo bekungumsebenzi olula ngekhodi elidala le-Urchin (ikhasiTracker) kepha kulula ngokumangazayo ngombhalo omusha wokushumeka weGoogle Analytics onikelwayo.
Ngokuyisisekelo, umane ungeze i-akhawunti eyengeziwe kuhlu _gaq! Uma ungathanda ukungeza okuningi, umane ushintshe u- “b” uye ku- “c” njalo njalo, njalo njalo. Hlala wazi ukuthi ulahla amakhukhi nge-akhawunti ngayinye oyingezayo, kepha-ke, ungathathi amandla kakhulu.
Ungakusebenzisa Kanjani Ukukhishwa Kwezindaba Zokusesha
Crowdsource Ukuhlanzeka Kwedatha Yakho ye-B2B
Dec 6, 2011 ngo-3: 33 PM
Ithiphu enhle kakhulu! Siyabonga ngokwabelana noDoug! Ngabe kukhona umthelela omubi kumakhodi amaningi esizeni uma elungiselelwe kahle? Ngaphandle kokuhlakazeka okwengeziwe kwamakhukhi kuyo yonke indawo?
Dec 6, 2011 ngo-3: 38 PM
Akukho lutho uma ngabe kumiswe kahle. Uma umane unamathisela amathegi weskripthi ambalwa ahlukile ekhasini, kungadala umonakalo ngamakhukhi, amanani we-bounce, nezibalo zizonke, noma kunjalo.
Ngo-Apr 19, i-2013 ku-8: i-24 PM
Lokhu kuqaliswa kubonakala kungasasebenzi kwenye yamasayithi ethu. Ingabe ukubonile ukuthi akusasebenzi futhi? Noma yimiphi imibono yokuthi kungani ingaba nayo?